Yar Za Win Hte Mhar Mg Ko Htar Yit Khae by vXpress - issuu
ရာဇ၀ ရာဇ၀င်ထဲမှာ မောင့်ကို ထားရစ်ခဲ့ ဂျူး နင့်Aပြုံးကြောင့် ငါ့ကိုယ်ငါ ရှက်သွားတယ်ဆိုရင် နင်Aံ့သြမိမလားမသိဘူး။ တကယ်ကို ငါရှက်သွားတယ်။ Aမှန်က နှစ်နှစ်တောင် ကြာခဲ့ပြီပ။ဲ ဒီလောက်ကြာမှတော့ တစ်ဖက်က ပြောင်းလဲတဲ့ AခြေAနေကို လိုက်ပြီး ငါ့ဘက်ကလဲ ပြောင်းလဲသင့်တာပေါ့။ Aနည်းဆုံးဟာ.. နင်ပြုံးပြလိုက်တဲ့ Aပြုံးမျိုးလေးကိုတော့ ငါတုံ့ပြန်နိုင်ဖို့ သင့်တာပဲ။ ဒါပေမယ့် နင်ပြုံးသလို ငါမပြုံးတတ်ဘူး။ ဒီAတွက် ငါ့ကိုယ်ငါ ရှက်တယ်။ နင့်Aပြုံးမှာ ငါ.. ဘာAရိပ်Aယောင်ကိုမှ မတွေ့လိုက်ဘူး။ သံယောဇU် Aရိပ်Aယောင်ကိုလည်း မမြင်၊ ကြင်နာရိပ်ဆိုတာလည်း မတွေ့၊ တမ်းတတဲ့ AနေAထားမျိုးလည်း မရှိ၊ လွမ်းရိပ်ဆိုတော့ ဝေးရော။ ငါ ချီးကျူးပါတယ်။ ဒါလောက်သန့်စင်တဲ့ Aပြုံးမျိုးကို ပြုံးနိုင်လို့ နင့်ကို ငါချီးကျူးပါတယ်။ ငါ နင့်ကို တွေတွေဝေေ၀ ကြည့်ရင်းက ပြန်ပြုံးပြဖို့ ကြိုးစားလိုက်ပါသေးတယ်။ ပြုံးတော့ ပြုံးလိုက်တာပဲ။ ဒါပေမယ့် ငါသိလိုက်ပါတယ်။ ငါ့နှုတ်ခမ်းတွေ လှုပ်သွားကြပေမယ့် Aပြုံးတစ်ခု ဖြစ်မသွားဘူးဆိုတာ။ Aဲဒီလို သိလိုက်တဲ့ Aချိန်မှာပဲ ၀မ်းနည်းမှုနဲ့Aတူ ရှက်ကြောက်မှုကိုပါ ငါခံစားလိုက်ရတယ်။ ငါ့ရှေ့မှာ လာရပ်တဲ့ နင့်ကို မကြည့်ရသဲလို ဖြစ်နေတယ်..။ Aမှန်ကတော့ နင့်ကို Aဝေးကတည်းက မြင်ပြီးသားပါ။ ဟိ.ု . Aဝေးကတည်းက နင်မှန်းသိပြီးသားပါ။ ငါ ဘယ်လို မေ့နိုင်မှာလဲ။ ဒီလို လမ်းလျှောက်ဟန်၊ ဒီလိုပုံစံကို ငါ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး မေ့နိုင်မှာလဲ။ နင်လမ်းလျှောက်တဲ့ပုံက တစ်မျိုး။ မျက်နှာကို ခပ်ပင့်ပင့် ကြော့ကြော့လေး လျှောက်တာမျိုးမှ မဟုတ်ဘ။ဲ နင်က မျက်နှာကို Aမြဲတမ်း ငဲ့ထားတာနော်။ ညာဘက်ကို ခေါင်းငဲ့ထားတော့ ဖြန့်ချထားတဲ့ ဆံပင်တွေက ညာဘက်မှာ ပိုရှည်နေသလို ထင်ရတယ်။ ထဘီကို ညာဘက်ခါးမှာ လာညှပ်ထားပြီး ညာလက်ကလည်း ထဘီဘေးAနားကို ခပ်လျော့လျော့ ဖိထားတတ်တယ် မဟုတ်လား။ နင့်ထဘီက Aရမ်းရှည်တာပဲ။ ခြေမျက်စိဖုံးတာထက်တောင် ကျော်ချင်သေးတယ်။ ကိုယ်ကို နွဲ့တာလည်း မဟုတ်ဘဲနဲ့ ယိုင်ယိုင်လေး လျှောက်တတ်တဲ့ နင့်ဟန်ကိုလေ.. ငါဘယ်တော့မှ မေ့မှာ
မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဒီတော့လ.ဲ . ဟိ.ု . Aဝေးမှာကတည်းက နင်မှန်းသိလိုက်တယ်။ နှစ်နှစ်လောက် မမြင်ရတဲ့ နင့်သဏ္ဍာန်ကို မြင်လိုက်ရတော့ ငါ့ရင်ထဲမှာ ဘယ်လို ဖြစ်သွားမှန်းမသိဘူး။ Aမှန်Aတိုင်းဆိုရင် နင့်ကို ငါမတွေ့ချင်ဘူး။ မတွေ့ချင်ဘူးဆိုတာမှာလဲ နင့်ကိုတွေ့ရင် ခံစားလိုက်ရမယ့် ဝေဒနာကို ငါကြောက်လို့ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဘယ့်နှယ်လုပ်မလဲ..။ ငါ ရပ်နေရာကနေ့ ရှေ့ဆက်လျှောက်ရင် နင်န့ပဲိုနီးမယ်။ နောက်ကိုလည်း လှည့်သွားလို့ မဖြစ်ဘူး။ ဖူးစာကုန်းဆိုတာက လာလမ်း Aပြန်လမ်း ဒီတစ်လမ်းပဲရှိတဲ့ မြစ်ကမ်းပါးကြီး မဟုတ်လား။ ငါ နောက်ဆုတ်သွားလို့မှ မဖြစ်ဘ။ဲ Aပြန်လမ်းကို ဆက်လျှောက်ဖို့ကျတော့ နင်က လျှောက်လာနေပြီ။ ဘာလုပ်ရမှန်း မသိတဲ့Aတူတူတော့ ရပ်နေလိုက်တာဟာ Aကောင်းဆုံးပဲလေ။ နင်ငါ့ကို Aဝေးတုန်းက လှမ်းမြင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ နင်က လမ်းလျှောက်ရင် နင့်ရှေ့နှစ်ကိုက်လောက်က မြေပြင်ကိုပဲ ငေးနေတတ်တယ် မဟုတ်လား။ ငါကတော့ ပြန်မယ်လို့ လမ်းဘက်ကို ခြေစçထားတဲ့သူ။ ဒီတော့ ငါကပဲ စçမြင်တယ်။ နင်တော့မသိဘူး။ ငါတော့ မြင်မြင်ချင်း တုန်လှုပ်သွားတာပဲ။ နင်ဆီ့က မျက်နှာလြွှဲ ပီး ရှေ့က မြက်ပင်လေးတွေကို ငေးကြည့်နေမိတာ..။ နင် ငါ့မြင်ကငွ်းထဲ ရောက်လာတဲ့ထိပေဲလ။ ငါ့ကို လှမ်းမြင်ရင် နင်လာလမ်းကိုများ ပြန်လှည့်မလားလို့ ပထမ တွေးမိသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် နင်က ပညာရှိပ။ဲ လူမိုက်Aလုပ်ကို မလုပ်ဘူးဆိုတာ တွေးမိပါတယ်။ စçမြင်လိုက်တုန်းက ဆုံရင် ပြုံးပြရမလား၊ ဘယ်လို ပြုံးရမလဲ .. စU်းစားထားတယ်။ စU်းစားလို့ မရဘူး။ နင်ကတော့ တော်ပါတယ်ဟာ။ သွားရင်းဟန်လွဲ မိတ်ဆွေပြုံးနဲ့တောင် ငါ့ကို နငတ်ဆက်တတ်နေပြီပ။ဲ "တစ်ယောက်တည်းလား..." ကြည့်စမ်း..။ ငါ့ရင်ထဲမှာ ဘယ်လိုဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာ နင်တွေးမိရဲ့ လား။ မေးရက်လိုက်တာ။ နင်ပဲ ငါ့ကို တစ်ယောက်တည်း ထားပစ်ခဲ့တာမို့လား။
ဒီတစ်ခါတော့ ခေါင်းညိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်။ နင့်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါနှုတ်ဆက်ရခက်၊ Aပြုံးရခက်နေတဲ့ ဒီAချိန်မှာ နင်က စနှုတ်ဆက်လို့။ (ရင်လနဲာရပါတယ်) “တစ်ယောက်တည်းလား” လို့ မေးခံရတဲ့ ဝေဒနာဟာ တစ်ယောက်တည်း ထားခဲ့လို့ ခံရတဲ့ ဝေဒနာနဲ့ မထူးပါဘူးဟာ။ ရင်နာနာနဲ့ နင့်ကိုငေးနေတဲ့Aချိန်မှာ ငါ့လက်ဖျားတွေေAးစက်လာလို့ ငါ့လယွ်Aိတ်ကို တင်းတင်း ဆုပ်ကိုင်လိုက်ရတယ်။ တုန်ယင်နေတဲ့ ငါ့Aထက်နှုတ်ခမ်းကြောင့်လား..။ ဝေဒနာရိပ်လွှမ်းနေတဲ့ ငါ့မျက်လုံးကြောင့်လား..။ ဟန်လုပ်ပြီး ခပ်မော့မော့ရပ်နေပေမယ့် ယိုင်န့ွေဲ နတဲ့ ငါ့ဟန်Aစစ်ကို နင်တွေ့သွားလို့လား..။ လွယ်Aိတ်ကိုပဲ ဖိဆုပ်ထားတဲ့ ငါ့လက်တွေကတစ်ဆင့် လှုပ်ရှားနေတဲ့ ငါ့စိတ်ကို ရိပ်မိသွားလို့လား.. ကွဲကွဲပြားပြားတော့ မသိဘူး။ Aဲဒီထဲက တစ်ခုခုကြောင့်ပဲ ထင်တယ်။ နင့်Aပြုံးက မှိန်သွားတယ်။ နောက်ပြီး ငါ့Aထင်က သံယောဇU်ရိပ်ကလေးကိုလဲ နင့်မျက်လုံးမှာ တွေ့လိုက်ရသလိုပဲ။ ဒီနှစ်နှစ်Aတွင်းမှာ နင့်ပုံစံကလဲ ဘာမှ မပြောင်းလဲပါလား။ ဆံပင်ကို Aရင်တုန်းကလိုပဲ နဖူးပေါ်က Aားလုံးသိမ်းပြီး နောက်ကိုလှန်ထားတယ်။ နင့်နဖူးက Aလျင်လို ရှင်းနေတုန်းပဲ။ နားသယ်စပ် နှစ်ဖက်ဆီမှာတော့ Aလျင်လို ဆံပင်တွေက Aုပ်ပြီးကျနေတယ်။ မျက်ခုံးကလဲ ခပ်ပါးပါး ခပ်မျှင်မျှင်ပ။ဲ Aလျင်ကလိုပါပဲ။ ဘာကိုမျှ ထပ်ဖြည့်ဆထွဲားတာ မရှိပါဘူး။ Aိ.ု . ဘာမှကို မပြောင်းလဲသေးပါဘူးလေ။ ပြောင်းလဲတာကတော့ Aချိန်တွေရယ်၊ နင့်သဘောထားတွေရယ်။ သြော်.. ကြည့်ပါUီး..။ နင့်ဆံပင်မှာ စကားပွင့် ဖြူဖြူလေးကလဲ Aရင်လိုပါဘဲလား။ စကားပွင့်လေးကို ငါငေးနေမိတာ Aကြာကြီးပဲ။ နင်ကလဲ ငါ့ကို ငေးနေပါတယ်။ နင်ဘာတွေ တွေးနေမလဲ။ ငါ့ပုံစံ ဘာမှ မပြောင်းလဲသေးတာကို နင်တွေးနေမှာပေါ့..။ ငါ့ဆံပင်ကို Aရင်လို ညာဘက်က ခွဲထားသလား နင်ကြည့်မယ်။
Aင်္ကျီလက်ကို ကြယ်သီးမတပ်ဘဲ Aရင်လို ဖိုးရိုးဖားရား ချထားလား.. နင်ကြည့်မယ်။ Aပေါ်ဆုံး ရင်ဘတ်ကြယ်သီးကို Aရင်လိုဖြုတ်ထားသလား.. နင်ကြည့်မယ်။ လွယ်Aိတ်ကို Aရင်လို ပခုံးစလွယ်သိုင်း လွယ်သေးသလား.. နင်ကြည့်မယ်။ ”ဖြေနိုင်တယ်မဟုတ်လား” စကားပွင့်လေးဆီကနေ့ နင့်မျက်နှာဆီကို Aကြည့်ပြောင်းလိုက်ရတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဆယ်တန်းစာမေးပွကဲို ရည်ရွယ်ပြီး မေးလိုက်တယ်ဆိုတာ ငါသိပါတယ်။ ငါ့ရင်ထမှဲာ စူးရှသွားတယ်။ ဘာဖြစ်လို့နာတာလဲ။ ငါ့ကိုယ်ခန္ဓာက သိပ်သေးငယ်သွားသလိုပ။ဲ ကမ္ဘာမြေကြီးက Aကြီးကြီး၊ ငါက သေးသေးလေးရယ်။ ငါ့ေAာက်နှုတ်ခမ်းကို Aပေါ်သွားနဲ့ ဖိကိုက်မိတယ်လို့ ထင်လိုက်တယ်။ ငါ့ခန္ဓာကိုယ်က သွေးတွေ ပူလာတယ်လို့ ထင်ရတယ်။ Aကြာကြီး ငေးကြောင်နေရင် မကောင်းတတ်လို့ ခေါင်းကို ဖြည်းဖြည်း ယမ်းပြလိုက်တာပါ။ နင်ဘာဖြစ်လို့ မျက်လွှာချသွားတာလဲ။ ဘာဖြစ်လို့ ပင့်သက်ရှိုက်လိုက်တာလဲ။ ငါဆယ်တန်းမဖြေနိုင်လို့ စိတ်မောစရာ နင့်မှာ မရှိတော့ဘူးဘဲ။ သြော်.. ငါ နင့်ကို တစ်ခွန်းမှ စကားမပြောရသေးဘူးနော်။ “ကျောင်းက ဘယ်နှစ်ရက်ပိတ်တာလဲ” ဒီမေးခွန်းကို ငါ ခက်ခက်ခခဲ မေးရတယ်ဆိုတာ နင်.. သိမှာပါ။ ”သုံးလ.. ဖိုင်နယ်ဖြေပြီးလို့ ပိတ်လိုက်တာ” ”ဘယ်နှစ်နှစ်ရောက်ပြီလဲ” ”Aခုပြန်တက်ရင် သာ့ဒ်Aမ်-ဘီ တတိယနှစ်” တစ်ဖက်ကို တစ်ဖက် ဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ နင့်လက်ချောင်းလေးတွေကို ငါငေးနေမိတယ်။ လက်သည်းက တိတိရိရိကို ကိုက်ဖြတ်ထားတာတွေ့လို့ Aရင်လိုပဲ ဆိုတာ သိလိုက်ရပြန်တယ်။
ဟောဒီဖူးစာကုန်းမှာပဲ ဟောဒီဆည်းဆာချိန်မှာပဲ.. Aဲဒီလက်ချောင်း ဖြူဖြူလေးတွေကို ငါ ဆုပ်ကိုင်ရင်း လမ်းလျှောက်ခဲ့ရဖူးတယ်။ နင့်လက်လေးတွေက နွေးနွေးလေး.. ပျော့န့နွဲ့ွေဲ လးတွေ။ AဲဒီAနွေးဓာတ်လေးဟာ ခုထိ မပြယ်သေးဘူးဆိုရင် နင်ယုံပါ့မလား၊ နင်ပန်နေကျ စကားပန်းရနံ့လေးဟာလဲ ငါ့ဆီမှာ Aမြဲပျံ့သင်းနေတယ်ဆိုရင် နင်ယုံပါ့မလား။ “နင်... သိပ်ပိန်သွားတယ်၊ နေမကောင်းဘူးလား..” ပိန်တယ်။ Aိ.ု . ငါ့ကို ပိန်တယ်လို့ Aထူးသတိထားမပြောကြတာ နှစ်နှစ်တောင် ရှိသွားပြီပ။ဲ ဒီနှစ်နှစ်Aတွင်း ငါပိန်သွားတယ်လို့ မှတ်ချက်ချတာ နင်က ပထမဆုံးပဲ။ “ကောင်းပါတယ်..” “ကျန်းမာရေးကိုလည်း ဂရုစိုက်Uီး..နော်၊ လူက တAားကို နွ့သွဲားတာပဲ” သြော်.. နင်တောင် ဆရာဝန်မကြီး ဖြစ်တော့မယ်။ Aရင်လို AခြေAနေမျိုးသာဆိုရင်တော့.. “ဆေးကုပေးမယ့်သူ ရှိသားပဲ”လို့ ပြုံးစပ်စပ်နဲ့ ပြောမိမှာပဲ။ ခုတော့ ဘယ်လိုပြောရမလဲ။ နှုတ်ခမ်းတင်းတင်းစေ့ပြီး Aတိတ်ကစကားသံတွေကို ဇွတ်မေ့ပစ်နေရပါတယ်။ ”စိတ်ဆိုးသွားလားဟင်၊ ငါက..” “Aိ.ု . မဟုတ်ပါဘူး” ကြည့်ပါUီး။ ဒီမျက်လုံးလေးတွေပေါ့ ငါ့ဒေါသတွေကို ချေမွပစ်ခ့တဲာ။ Aဲဒီလိုပဲ ဝေ့ကြည့်လိုက်ရင် ငါ့ရင်ထကဲဒေါသတွေဟာ ဘယ်ရောက်ကုန်မှန်း မသိတော့ဘူး။ တကယ်ဆို.. ငါနင့်ကို ဘယ်လောက် နာကျည်းသင့်သလဲ။ မပြောမဆိုနဲ့ သစ်စိမ်းချိုးချိုးခဲ့တာ ဘယ်သူလ.ဲ .၊ စာတွေ တစ်စောင်မှ မပြန်ဘဲ လတွေ Aများကြီး နှိပ်စက်ထားခဲ့တာ ဘယ်သူလ.ဲ .၊ စိတ်မချလွန်းလိ.ု့ . မနေနိုင်လို့ မန္တလေးထိ လိုက်လာရတဲ့သူကို မယုံလို့လား.. ဆိုပြီး စိတ်ကောက်ခဲ့တာ ဘယ်သူလဲ..။ မန္တလေးကို မလာရဘူး နင်ပဲ Aမိန့်ထုတ်ခ့တဲယ်။ ငါနောက်ထပ်တစ်နှစ် ထပ်ကျမှာ စိုးလို့ပေါ့လေ..။
ငါ မန္တလေးက ပြန်လာတော့ရော နင်စာလှမ်းရေးခဲ့လို့လား။ နင် ကျောင်းခဏပိတ်လို့ ရေနံချောင်ကို ပြန်ရောက်တ့Aဲချိန်မှာ လာနေကျ နေရာကို လာဖို့ ပျက်ကွက်ခဲ့တာလဲ.. နင်ပဲ။ သုံးရက်ဆက်တိုက် မလာလို့ AကျိုးAကြောင်းမေးတော့ မျက်နှာစိမ်း ခြယ်ထားတာ ဘယ်သူလ။ဲ ငါ ဆေးတက္ကသိုလ် မရောက်နိုင်မှန်း သိလျက်နဲ့ ဆရာဝန်ဖြစ်ေAာင် ကြိုးစားခိုင်းခဲ့တဲ့ နင့်စေတနာကို ငါကြောက်ပါတယ်၊ ငါ ပန်းချီဆရာ၊ ကဗျာဆရာ ဖြစ်ချင်မှန်း Aစကတည်းက နင်သိလျက်န.ဲ့ . နောက်ပြီး.. Aိ.ု . ဒါတွေဟာ လမ်းခွဲဖို့ Aကြောင်းရှာတာတွေပဆဲိုတာ Aဲဒီတုန်းက မသိခဲ့တာ ငါ ညံ့လို့ပေါ့။ နင့်ကို ငါယုံခဲ့တာကိုး။ နင်ပြန်ခါနီးမှာ ငါ့ဆီက နင့်စာတွေ ပြန်တောင်းခဲ့တာလေ.. ငါ ဘယ်တော့မှ မမေ့ဘူး။ ကြည့်ပါUီး။ ခုရပ်နေရင်းကို ဘာဖြစ်လို့ ရင်နာလာရတာလဲ။ ဒီAကြောင်းတွေ ပြန်စU်းစားရင် ငါ့ရင်က ဘာဖြစ်လို့ လှိုက်လာရတာလဲ။ နှစ်နှစ်ဆိုတဲ့ Aချိန်ဟာလဲ ငါ့ဒဏ်ရာကို မကုစားနိုင်ခ့ပဲါလား။ Aိ.ု . ငါ နင့်ကို Aကြာကြီး ကြည့်နေမိတာပဲ။ ငါ့မျက်စိ လွှပဲစ်သင့်တာ ငါသိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နင့်မျက်နှာပေါ်ကနေ Aကြည့်ကို မဖယ်နိုင်ဘူး။ ငါ့ရင်ခင်ွထဲကနေ ဘယ်သူမှ လုမပြေနိုင်ေAာင် တAားဝှက်ပြီး ကာထားချင်တယ်၊ နင့်ကို ဘယ်မှ မသွားေAာင် လုပ်ထားချင်တယ်၊ မစိမ်းရဘူး.. မပြေးရဘူး..လို့ေAာင်ပစ်ချင်လိုက်တာ။ ဟောဒီလွယ်Aိတ်ကလေးထဲ နင့်ကို ထည့်ထားလို့ ရရင် သိပ်ကောင်းမှာ။ ဘယ်သွားသွား မခွဲဘူး။ Aိ.ု . ငါဘာတွေလျှောက်တွေးနေတာလဲ။ ငါ့ လွယ်Aိတ်ထဲမှာ နင်ရှိနေပါတယ်၊ တကယ်။ နင့်ပုံတူ ပန်းချီလေ။ နျစ်ခုတောင်မှပ။ဲ Aခုနေ ထုတ်ပြလိုက်ရင် ဘယ်လိုနေမလဲ။ “ပန်းချီ.. ဆွ.ဲ . ဆွေဲသးလား..” ကြည့်စမ်း..၊ ငါ့Aတွေးနဲ့ နင့်Aတွေးနဲ့ ဆင်လိုက်တာ။ စိတ်ချင်း ဆက်သယ်ွတာလား၊ လူချင်းပြန်နီးဖို့
နိမိတ်လား။ ခေါင်းကို Aသာညိတ်ရင်း လက်က ဘယ်လိုရောက်သွားလဲ မသိဘူး။ လွယ်Aိတ်ထကဲခဲပုံတူတစ်ပုံ၊ ရေဆေးနဲ့ တစ်ပ.ုံ . နင့်ပုံတူ နှစ်ခုကို ထုတ်ပြမိတော့တာပဲ။ မပြုံးတပြုံး နင့်နှုတ်ခမ်းပါးလေး ၀ိုင်းသွားတာ ငါသတိထားမိတယ်။ နင့်မျက်လုံးလေးတွေ ဝေသွားတာ ငါသိတယ်။ နင့်ကိုယ်လုံး နွဲ့နွဲ့လေး ယိုင်သွားတာ ငါသိလိုက်တယ်။ “Aိ.ု .” တိုးတိုးကလေး ရေရွတ်သံကို ငါကြားလိုက်ပါတယ်။ ငါ့ကို ငေးကြည့်နေတဲ့ Aကြည့်ထမှဲာ သံယောဇU်ကို ငါမြင်ပြီ။ ခင်တွယ်မှုကို ငါမြင်ပြီ။ တမ်းတမှုကိုလည်း ငါပြန်တွေ့ပြီ။ နောက်ပြီး.. နောက်ပြီးတော့ Aလွမ်းတွေ Aများကြီး ငါတွေ့လိုက်ပြီလေ။ Aိ.ု . နင့်Aကြည့်က ငါ့ကို ရင်ခုန်စေတယ်။ နင်လဲ ရင်ခုန်နေတယ် မဟုတ်လား။ ပန်းချီစာရွက်တွေကို ကိုင်ထားတဲ့ နင့်လက်ချောင်လေးတွေ တုန်ယင်နေတာ ငါမြင်တယ်။ ငါ့ကို ငေးရာကနေ ငါ့ဘယ်ဘက်ကို လှမ်းငေးလိုက်တဲ့ နင့်မျက်လုံးမှာ မျက်ရည်ဝေ့ဝေ့ကိုလဲ ငါ မြင်လိုက်ရပါတယ်။ နင်ငေးရာကို ငါ လှမ်းကြည့်မိတယ်။ ဗြုန်းဆို ရင်က ဟာသွားတယ်။ နေရာဟောင်း..၊ ဟုတ်တယ်နော်..၊ ကမူထိပ်လေးလေ။ နင်န့ငဲါနဲ့ ဟိုAတိတ်တုန်းက Aတူထိုင်ခြဲ့ ကတဲ့ နေရာလေးပါ။ ဒီကမူလေးကို ကြည့်ပြီး ဘာဖြစ်လို့ လက်ဖျားတွေေAးလာရပြန်တာလဲ၊ တစ်ကိုယ်လုံးက ဘာဖြစ်လို့ ပျော့ခွေသွားရတာလဲ။ နှမြောတမ်းတတဲ့ ဝေဒနာပဲ ထင်ပါရဲ့။ ငါ့ရင်ထမှဲာ ပျံ့နှံ့ကုန်ကြပြီ။ နင်နဲ့ ငါနဲ့ Aကြည့်ချင်း ပြန်ဆုံကြတယ်။ နောက်.. နောက်တော့...။
နင်ကပဲ ခြေလှမ်း စçတာလား.. ၊ ငါကပဲ Aလျင် ခြေလှမ်းစတာလား မသိဘူး။ ဘယ်သူက Aလျင်Uီးသလဲ မပြောတတ်ဘူး။ သိလိုက်တာက နင်နဲ့ငါ နှစ်ယောက်လုံး ကမူစနွ်းလေးဆီကို သွားနေမိတယ် ဆိုတာပဲ။ Aဲဒီရောက်တော့လဲ နှစ်ယောက်သား ရှိန်းတိန်းတိန်းနဲ့ပဲ ခပ်ခွာ ခွာ ထိုင်လိုက်မိကြတယ်။
နင် ခေါင်းငုံ့ထားတယ်။ နင့်ဆံပင်တွေက ခါးတောင် ကျော်နေပြီပ။ဲ နက်မှောင်ပြီး ဖွာနေတယ်။ လှလိုက်တာဟာ။ နက်မှောင်တဲ့ နောက်ခံပေါ်မှာ Aဖြူရောင် ပန်းပွင့်လေးက ထင်းနေတာပဲ။ နင် ဘာဖြစ်လို့ ငြိမ်နေတာလဲ။ နင်လဲ ငါ့လိုပဲ Aပျော်လေးတွေ ပြန်တွေးနေမှာပဲနော်။ ပျော်ရတဲ့ Aချိန်လေးတွေက တစ်သက်လုံး ပြန်မရောက်နိုင်တော့ပါလား။ တို့တွေဟာ သူစိမ်းပြင်ပြင် ဖြစ်နေကြပြီနော်။ ဒါတွေဟာ Aိပ်မက်မက်နေတာဆိုရင် ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲ။ မဖြစ်နိုင်မှန်းတော့ သိနေပါတယ်လေ။ ငါ Aမျိုးမျိုး တောင်းပန်တဲ့ကြားက နင် ခြေစုံကန်သွားတာကိုး။ နင့်ကို ငါ စိမ်းစိမ်းကားကားကြီး ပြောပစ်ချင်တယ်။ လွန်ခ့တဲ့ နှစ်နှစ်က မပြောလိုက်ရတဲ့ စကားတွေကို Aားရပါးရ ပြောချင်တယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့လေ.. နင့်ပခုံးနျစ်ဖက်ကို တAားဆုပ်ကိုင်ပြီး ဆောင့်ဆောင့်လှုပ်ရင်း မေးလိုက်ချင်ပါတယ်။ “နင် ဘယ်လို လုပ်ပစ်ခဲ့တာလဲ..”လို့။ ဟောဒီ ဖူးစာကုန်းမှာတင်မက ရေနံချောင်းတစ်မြို့လုံး လွှမ်းသွားလောက်တဲ့ Aသံနဲ့ ကုန်းေAာ်ပစ်လိုက်ချင်တယ်။ နင်သိပ်ဆိုးပါလား။ ဆင်ခြေရဖို့Aတွက် ငါချစ်တဲ့ကဗျာနဲ့ ပန်းချီကို ဝေဖန်ခဲ့၊ စွန့်လွှတ်ခိုင်းခဲ့တာလေ။ ဟိုတုန်းက ငါကဗျာရေးတာ၊ ပန်းချီဆွဲတာကို နင်မသိဘူးလား။ ဟောဒီ ဖူးစာကုန်းမှာရော.. ၊ ကျောင်းခန်းထဲမှာရော..၊ ကျောင်းဝိုင်းထဲက တမာပင်ေAာက်မှာရော.. ငါ့လွယ်Aိတ်ထဲက ငါ့ကဗျာတွေ ဖတ်ခဲ့တာ နင်မေ့ပြီလား။ ငါ့ပန်းချီတွေ ကြည့်ခ့တဲာ နင်မေ့ပြီလား။ ဟိုတုန်းကတော့ နင်ပဲ ငါ့ကဗျာတွေကို ငါ့ကို ချစ်သလို ချစ်ပါတယ်ဆို။ ဟိုမှာ ဒုတိယလူကို ရပြီးကာမှ ငါ့ကဗျာကို နင်မုန်းတတ်တာပါဟာ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ငါ့ဒေါသက ဘယ်တော့မှ ကြာကြာမခံခ့ရဲဘူး။ ဒီပွဲက လူမိုက် လူမိုက်ချင်း တွေ့ကြတဲ့ပမွှဲမဟုတ်ဘ၊ဲ ပညာရှိနဲ့ လူမိုက်ပေဲလ။ မျက်ရည်လည်နေတဲ့ မျက်လုံး ၀ိုင်းဝိုင်းလေးတွေရယ်၊ မဲ့တ့တဲ့ေဲလး မဟတဟဖွင့်ထားတဲ နင့်နှုတ်ခမ်းလေးတွေရယ်က ငါ့ဒေါသတွေကို ချေဖျက်ပစ်ခ့တဲယ်။ ဒါတယ်မကဘူး၊ နင့်မျက်နှာထားလေးနဲ့ နင့် Aကြောင်းပြချက်လေးတွေကြောင့် ငါ့ကိုယ်ငါ တိုင်နဲ့ ခေါင်းနဲ့ ဆောင့်ပြီး Aပြစ်ပေးလိုက်ရမလိုလို ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ငါ့ကိုယ်ငါတောင် ဇဝေဇ၀ါ ဖြစ်ခ့ရဲတယ်။ နင့် မျက်တောင်ကော့တွေပေါ်မှာ ခိုတွေဲ နတဲ့ မျက်ရည်စတွေဟာ ငါ့နာကျည်းချက်တွေကို တစစီဖ့ပဲစ်ခ့တဲယ်။
နင့်Aကြောင်းပြချက် တစ်ခုကတော့ဟာ လွန်လနွ်းပါတယ်။ ငါAတန်းပညာမှာ ညံ့တာ နင်လAဲသိ။ ငါ့ကိုနင်ပဲ စာပြပြပေးခဲ့ရတာ။ ဒီလိုကောင်က ဘယ့်နှယ်လုပ်ပြီး ဆရာဝန်၊ Aင်ဂျင်နီယာ ဖြစ်နိုင်မှာလဲ။ ပန်းချီသမား... ကဗျာသမားပဲ ဖြစ်ဖို့ရှိတာပဲ။ မဖြစ်နိုင်တာကိုမှ နင်က ရွေးပြီး တိုက်တနွ်းခဲ့တာကိုး။ နင့်Aမေ ဂုဏ်မက်တာ ငါသိပါတယ်။ နင့်Aမေလိုပဲ နင်မက်လိမ့်မယ်လို့ Aစက မတွေးခဲ့မိတာ ငါ့Aမှားပါပဲ။ နင်ကတော့ Aမေ သဘောတူလို့ ပေါ့။ နင့်သဘောကလဲ Aတန်းတူ၊ Aရည်Aချင်းတူ လူကိုမှ မက်မောခဲ့တာပဲ မဟုတ်လား။ Aိ.ု . Aားလုံးဟာ နင့်သဘော တစ်ခုတည်းနဲ့ ပြီးသွားခဲ့တာပဲ။ ငါ့ ဆန္ဒတစ်ခုမှ မပါခဲ့ရဘူး။ နင့်ရှေေ့  ရာက်ရင် ငါ ခေါင်းယမ်းတဲ့ Aတတ်ပညာကိုတောင် မေ့မေ့သွားရပါတယ်။ တခြားလူတွေရှေကမှာ ကျောက်တုံး ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်.. နင့်ရှေ့မှာတော့ ငါက ဖယောင်းပါ။ ငါက နင့်ရဲ့ ရုပ်သေးရုပ်ပဟဲာ..။ နင်ကြိုးဆွဲသလို ငါက ကçခဲ့ရတာ။ေAးလေ.. ခံခဲ့ရတုန်းကတော့ ခံခဲ့ပြီးပြီ။ ခုAချိန်မှာတော့ နင့်ရုပ်သေးရုပ် မဖြစ်ချင်ပါဘူး။ Aမှန်ကတော့ ဟောဒီနေရာမှာ AတူယှU်တထွဲိုင်ဖို့ မသင့်ဘူး။ ငါထွက်သွားနိုင်ရင် Aကောင်းဆုံးပါပဲ။ နင့်မျက်နှာ ညှိုးမှာလဲ စိုးတယ်။ နင့်မျက်နှာညှိုးကို ဟိုတုန်းကတည်းက ကြောက်ခ့တဲ့ ကောင်ပါဟာ။ ပန်းချီစာရွက်တွေကို ကိုင်ထားတဲ့ နင့်လက်ခုံလေးကို ငေးရင်း ရင်ထမှဲာ တင်းကျပ်လာပြန်ပြီ။ ဖြူနုနေတဲ့ နင့်လက်ခုံလေးကို ဖွဖွေလး ဆုပ်ပြီး နင့်မျက်နှာလေးကို တမေ့တမြော ငေးနေရတဲ့ Aချိန်လေးတွေဟာ လွန်ခဲ့ပြီနော်။ ငါထင်ပါတယ်.. နင့်လက်မှာ ရှင်မတောင် သနပ်ခါးနဲ့လေး သင်းနေဆဲ ဖြစ်မှာလို့။ ရင်ထဲမှာ နာကျင်လာတယ်။ ပြောစမ်းပါUီး ဆေးကျောင်းသူကြီးရဲ့။ ဘာနဲ့မှ မခိုက်မိဘနဲ့ Aဲဒီဘယ်ဘက်ရင်က ဘာဖြစ်လို့ လှိုက်လှိုက်ပြီး နာတာလဲ။ နှလုံးဆီက နာမှန်းတော့ သိပါရဲ့။ နင့်မျက်နှာလေး ငေးရုံနဲ့ နှလုံးက ဘာလို့ နာရတာလဲ။ ငါ့လည်ချောင်းတွေကရော ဘာဖြစ်လို့ ခြောက်သွေ့လာရတာပါလိမ။့် ငါ နျမြောနေတယ်.. တမ်းတနေတယ်။ ဟုတ်တယ်၊ နင် ငါ့Aနားမှာ ရှိနေပေမယ့် နင့်ကိုေAာက်မေ့နေတယ်ဟာ။ နင့်ကို လွမ်းနေတယ်။ ယုံရ့လဲား.. နင့်ကို ငါလွမ်းနေတယ်။ ”ရော့..”
နင်လှမ်းပေးတဲ့ ပန်းချီပုံနှစ်ခုကို ယူလိုက်တော့ နင့်လက်နဲ့ ငါ့လက် ထိမိတယ်။ ဘယ်သူ့လက်က ပိုေAးစက်နေလဲ ငါမသိဘူး။ စာရွက်ကလေးတွေကို လွယ်Aိတ်ထဲ ထည့်ပြီးတော့ ငါ့လက်ကို ငါပြန်ငေးမိတယ်။ သြော်.. လက်သန်းမှာလေ၊ ဘယ်ဘက် လက်သန်းမှာလေ Aဖြူစင်းကြောင်းလေးကို Aရစ်လိုက် မြင်နေရတုန်းပဲ။ Aဲဒါ လက်စွပ်ရာလေးလေ။ နင်န့ငဲါ့ရဲ့ Aချစ်နေ့က နင်ပေးခဲ့တဲ့ ကျောက်စိမ်းလက်စပ်ွရဲ့ သင်္ကေတလေး။ မနှစ်ကမှ စာနဲ့လှမ်းတောင်းလို့ ပြန်ပေးခဲ့ရတဲ့ လက်စပ်ွရဲ့ AရာAလေးပါ။ Aခု.. Aဲဒီလက်စွပ်ကလေးက Aခုဆ.ို .။ သြော်.. ပြီးတော့ နင့်လည်ပင်းမှာ ဆွဲကြိုးကလေးလဲ မမြင်ပါလား။ ဆြွဲ ကိုးမျှင်မျှင်လေးလေ.. နင်နဲ့ငါ့ဇာတ်လမ်းကလေး စçပြီးတဲ့နောက် လော့ကတ်သီးလေးနေရာမှာ သင်္ကေတတစ်ခု လဲပြောင်းတပ်ထားခဲ့တဲ့ ဆွဲကြိုးလေး။ ငါ့နာမည် Aစ စာလုံး Aင်္ဂလိပ်Aက္ခရာ Aင်(န်)ကို Aမှတ်တရ လုပ်ပြီး ဆွခဲ့ပါရော။ Aဲဒီဆွဲကြိုးလေး မမြင်ပါလား။ လွှင့်ပစ်လိုက်ပြီလား။ Aင်းလေ.. Aဖြစ်နိုင်ဆုံးကတော့ Aင်(န်)စာလုံးAစား Aက်(စ်)စာလုံး လဲတပ်ထားတုန်း ဖြစ်မှာပေါ့။ Aိ.ု . ဒါက ငါ့Aရေးမှ မဟုတ်ဘ။ဲ ငါနဲ့ နင်နဲ့ ဘာမှမှ မဆိုင်ဘ။ဲ မဆိုင်တော့ပါဘူးလေ။ ငါ့နှုတ်ခမ်းတွေ ခြောက်သွေ့နေတယ်။ ရင်က ဟာပြီးမှ ပူလောင်နေတယ်။ ဆေးလိပ်သောက်မယ်.. လို့ Aမှုမဲ့ Aမှတ်မ့ေဲတွးပြီး လွယ်Aိတ်ထကဲဒူးယားတစ်လိပ်ရယ်.. မီးခြစ်လေးရယ် ထုတ်လိုက်တယ်။ နှုတ်ခမ်းပေါ်မှာ ဆေးလိပ်လေးကို ရွရွတင်လိုက်တုန်း..။
“ဆေးလိပ်တွေ သိပ်မသောက်နဲ့ဟာ” တဲ့။ နင့်Aသံပါ။ နင့်ဆီက လာတာ မဟုတ်မှန်းတော့ သိပါတယ်။ ဘယ်ကပါလိမ့်။ ဟောဒီမီးခြစ်ကလေးကပဲ ထင်တယ်။ ဒီမီးခြစ်ကလေးဟာလဲ နင်နဲ့ငါ့Aတွက် Aမှတ်တရ ပစ္စည်းလေးပါ။ သစ်သားမီးခြစ်ပိန်ပိန်လေးနဲ့ မီးခြစ်ခြစ်နေရတဲ့ ငါ့Aဖြစ်ကို နင်ကြည့်ပြီး လက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ Aချစ်မီးခြစ်လေး။ နင့်Aချစ်က ဟောင်းပြီး ပျက်သွားပေမယ့် နင့်လက်ဆောင်လေးက မပျက်သေးပါဘူး။ ငါ ငိုင်နေမိတာ ဘယ်လောက်ကြာသလဲ မပြောတတ်ဘူး။ ငါ့ဘေးကကပ်ပြီး Aသံတစ်ခု ကြားလိုက်ရတယ်။
နင့်ဆီကပါ။ ထိန်းချုပ်ထားရင်းက ပွင့်ထွက်လာတဲ့ Aသံမျိုး။ Aိ.ု .။ နင်.. ငိုနေတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ ငါမျက်စိ မမှားပါဘူးနော်။ ငါ့ နားကြားလဲ မလွပဲါဘူး။ နင်ငိုနေတာပါ။ ငါ့လက်ထဲက မီးခြစ်ကလေးကို ငေးရင်း နင်ငိုနေတာပါ။ ငါ့တစ်ကိုယ်လုံးဟာ မြေကြီးနဲ့ တAား ကပ်ဖိခံထားရသလိုပ။ဲ ငါ ဘာဖြစ်သွားတာလဲ။ ငါ မယုံတာထင်တယ်။ ဟုတ်တယ်.. ငါမယုံဘူး။ နင်ငိုနေတာလို့ ငါဘယ်လို ယုံရမှာလဲ။ လောကကြီးဟာ ဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလ။ဲ Aိ.ု . မယုံပါဘူး.. မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် နင့်မျက်ရည်တွေဟာ ငါ့ရင်ကိုလာပြီး Aပူပေးနေတယ်။ ငါ့နှလုံးသားကို ဆတ်ဆတ်ခါေAာင် ဆွဲယမ်းနေတယ်။ ကြာရင်တော့ ပူလွန်းလို့ ကျွမ်းရချည်ရ့ကဲယွ်။ ငါဘာလုပ်ရမှာလဲ ပြောပါUီး။ ဆံပင်က ကပိုကရိုကြားထဲက နင့်မျက်နှာ နွမ်းနွမ်းလေးဟာ ဟောဒီကမ္ဘာမှာ Aင်Aား Aကြီးဆုံးပဲ သိလား..။ တုန်ယင်နေတဲ့ နင့်နှုတ်ခမ်းပါးလေးကို ငါ မကြည့်ရက်ဘူး။ မငိုနဲ့ Aချစ်ရယ်.. လို့ မျက်ရည်သုတ်ပေးရင်း ချော့ရမလား..။ နင့်မျက်နှာပေါ်က ဆံနယ်ွစတွေကို လက်နဲ့ AသာAယာဖယ်ပေးရင်း နှစ်သိမ့်ရမလား၊ နင့်မေးစေ့လုံးလုံးလေးကို လက်နဲ့ Aသာပင့်တင်ရင်း နဖူးလေးကိုပဲ ဖွဖွနမ်းလိုက်ရမလား။ ငါ့မှာ နင့်Aငိုကို ချော့ပိုင်ခငွ့်ရောရှိရ့လဲား။ ကြည့်ရင်း.. ကြည့်ရင်း ငါ့မျက်စိထဲမှာေ၀၀ါးလာတယ်။ မျက်လုံးက စိုစတ်ွလာတယ်။ နင့်ကိုယ်ပေါ်က Aစိမ်းနုရောင်ဟာ ပိုဖျော့ပြီး ၀ါးသွားတယ်။ Aိ.ု . ငါ့နှုတ်ခမ်းထောင့်စနွ်းတွေက ငါထိန်းလို့မရေAာင် တုန်လှုပ်နေပြီလား။ နောက်ပြီး.. ငါ Aသက်မှ ရှူမိရ့လဲား..။ ငါ့ နှလုံးခုန်သံရော ရပ်သွားသလား။ ငါ့ကိုယ်ငါ သတိရတဲ့Aချိန်မှာ ငါ နင့်လက်ကို ဆုပ်ကိုင်ထားမိပြီ။ Aိ.ု . မဟုတ်ဘူး.. မဟုတ်ဘူး။ နင်က ငါ့လက်ကို ဆုပ်ထားတာမဟုတ်လား။ Aိ.ု . မသိပါဘူးလေ။ ဘယ်သူ့လက်က ဘယ်သူ့လက်ကို ဆုပ်ထားတာလဲ မသိပါဘူး။ ငါ့ရှေ့က မြက်ခင်းပေါ်မှာ ဒူးယားစီးကရက်လေးရယ်၊ မီးခြစ်ကလေးရယ်.. လွတ်ကျနေကြတယ်။ မီးခြစ်ကလေးပေါ်မှာ ငါးလေးနှစ်ကောင် မျက်နှာချင်းဆိုင်နေကြတယ်။
Aိ.ု . ဒါပေမယ့် .. သူတို့ တစ်ကောင်နဲ့တစ်ကောင် Uီးတည်ရာဘက်တူရ့လဲား။ ဆန့်ကျင်ဘက်ကို Uီးတည်နေကြတယ်နော်။ ကြည့်ပါUီး.. သူတို့က Uီးတည်ရာမှ မတူဘ။ဲ ဒါကိုရော.. နင်သတိထားမိရဲ့လား။
”နိုင.် .” ငါ့ တစ်ကိုယ်လုံး လေထဲမှ မြောက်သွားသလိုပ။ဲ ရင်ထကဲတော့ ဟာနေတယ်။ နိုင.် . တဲ့လား။ နင် ငါ့ကို နိုင် လို့ ခေါ်သေးတယ်နော်။ ခေါ်နိုင်စွမ်းရှိသေးတယ်နော်။ နင့်Aကြည့်ကို ငါ နားမလည်တာ Aမှန်ပါ။ နင့်မျက်လုံးက ငါ့ဆီမှာ မဟုတ်ဘူးထင်တယ်။ ငါ့ကိုတော့ ကြည့်နေတယ်လေ။ တစ်မျိုးပဲ။ ငါ့ကို ကျော်ပြီး ငေးနေသလိုပ။ဲ နင် ဘာတွေ တွေးနေတာလဲ။ နင် ဘာကို ပြောချင်နေတာလဲ၊ တစ်ချက်တစ်ချက် ရှိုက်လိုက်တဲ့ နင့်ရှိုက်သံလေးတွေက ငါ့နှလုံးကိုသာ လာဆောင့်နေတယ်။ ”ပြောလေ.. ငါ နားထောင်နေပါတယ်” နင့် နှုတ်ခမ်းတွေကို တင်းနေေAာင် စေ့ထားတယ်။ နောက်ပြီး.. နင် သက်ပြင်းချလိုက်တယ် မဟုတ်လား။ နင့်ကို ကြည့်နေတဲ့ ငါ့Aကြည့်ထဲမှာ မျှော်လင့်ရိပ်တွေ ပါသွားမယ်လို့ ငါထင်တယ်။ ငါ့ရင်ထမှဲာရှိတဲ့ တမ်းတမှု ဆန္ဒကို နင်လဲ နားလည်ပါလိမ့်မယ်။ နင့်မှာလဲ တွယ်တာစိတ်တွေ ရှိမှာပါ။ ဒါပေမယ့် မန္တလေးမှာက..။ Aိ.ု . ငါ့ခေါင်းက ဘာဖြစ်လို့ မူးသွားရတာလဲ။ ကြည့်ပါUီး။ နင်ဘာလုပ်တာလဲ။ Aခု နင်ဘာလုပ်နေတာလဲ။ နင်က ဒီလိုပဲလား။ နင့်စိတ်က နီးရာကို ယိမ်းတတ်သလား။ နင့်လက်ကို လွှတ်လိုက်မိတဲ့Aတွက် ငါ့ကို ခွင့်လွှတ်ပါ။ ငါကြောက်တယ်ဟာ။ ”နိုင်ရယ်..” နင် ဘာလို့ ညည်းတာလဲ။ ငါ့ကိုရော ဘယ်လို Aဓိပ္ပါယ်နဲ့ ကြည့်တာလဲ။ နင့်ကို ငါသနားတယ်။ ငါဆိုတဲ့ ကောင်က နင့်မျက်ရည်တစ်ပေါက်ကို ပေါက်ကွဲတတ်တဲ့ ဗုံးတစ်ခုလို ကြောက်တတ်ခ့တဲ့ ကောင်မဟုတ်လား။ ငါ့ရင်တွေ Aရမ်းခုန်နေပြီ။ နင်ပြောချင်တာကို မြန်မြန်ပြောလိုက်ပါလား။
“ငါ့က.ို . ခွင့်လွှတ်ပါ” Aိ.ု . နင် ငါ့ကို တောင်းပန်တယ်။ ငါနင့်ကို ဘယ်တုန်းကမှ Aပြစ်မဆိုခ့ပဲါဘူးဟာ။ ငါ Aမြဲတမ်း ခွင့်လွှတ်ထားတာပဲ။ တောင်းပန်စရာ မလိုပါဘူးဟာ။ တောင်းပန်မယ့်Aစား Aကြောင်းစုံကို ငါ့ကို ပြောပြရင် သိပ်ကောင်းမှာ။ ငါ့Aပေါ်မှာ Aလျင်လို စိတ်မျိုး ထားနိုင်မယ်လား။ “ဟိုတုန်းကAတွက်ရော၊ Aခု ငိ.ု . ငိုမိတ့Aဲတွက်ရော” “ဟင်..” ငါ ဘာနားလည်ရမှာလဲ၊ ဘယ်လို နားလည်ရမှာလဲ။ ငါ့ပါးစပ်က တစ်ခုခု ပြောနိုင်ရင်ကောင်းမယ်။ ဘာမှ မပြောနိုင်ဘူး။ ဘာဖြစ်နေတာပါလိမ့်။ “ငါသွားတော့မယ်” ငါ့ တစ်ကိုယ်လုံးေAးစက်သွားတယ်။ ဟုတ်မှ ဟုတ်ရ့လဲား၊ နင်ပြောလိုက်တာမှ ဟုတ်ရဲ့ လား။ သွားတော့မယ် ဟုတ်လား။ သြော်.. နောက်ဆုံးတော့ တစ်ယောက်တည်းဟာ တစ်ယောက်တည်းပါပဲလား။ နင် ငါ့Aနားက ထသွားလိုက်ပြီထင်တယ်။ ဝေးသွားတဲ့ နင့်ခြေသံကို ငါ ကြားနေရသလိုပ။ဲ ဒါပေမယ့် သနပ်ခါးနံ့လေးကတော့ ငါ့ Aနားမှာ ကျန်ခ့ပဲါရော။ နင့်ရှိုက်သံလေးတွေလဲ ငါ့Aနားမှာ ကျန်ခဲ့ပါရော။ လောကကြီးဟာ ရှိသင့်တာထက် ပိုမှောင်သွားတယ်။ ငါ့ရင်ထမှဲာလည်း ရှိသင့်တာထက် တစ်ခုခု ပိုလာသလိုပ။ဲ Aိ.ု . မဟုတ်ပါဘူး။ လိုတာ..။ ရှိသင့်တာထက် တစ်ခုခု လိုတာ။ နင့်ကို ငါ ပြန်လှည့်ကြည့်ချင်တယ်။ နင်လဲ ငါ့ကို တစ်ချက်ဖြစ်ဖြစ် ပြန်လှည့်ကြည့်မယ်လို့ ထင်တယ်။ Aခုနေ.. နင် ဝေးဝေးရောက်Uီးမှာ မဟုတ်ဘူး။ ငါ လှမ်းခေါ်မယ်လေ။ မိမွန်ရေ.... လို့ေAာ်လိုက်မယ်။ နင်လဲ ငါ့ခေါ်သံကို စောင့်နေမယ် မဟုတလ်ား။ ခေါ်သံကြားရင် တAားပြန်ပြေးလာမှာ.. နော်။ Aိ.ု . မခေါ်ဘူး.. လှည့်မကြည့်ဘူး.. လှမ်းမခေါ်ဘူး။
လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ပွေ့ထားတဲ့ ဒူးနှစ်ခုပေါ်မှာ မျက်နှာကို တAား မှောက်ချလိက်ုတယ်။ နင့်ဘက်ကို မျက်နှာလှည့်မိမှာစိုးလို့။ စိုစွတ်လာတဲ့ မျက်စိတွေကိုလည်း ဇွတ် မှိတ်ပစ်လိုက်တယ်။ နင့်သဏ္ဍာန်လေးကိုချည်း မြင်နေရမှာစိုးလို့။ေAာက်နှုတ်ခမ်းကို သွားနဲ့ဖိပြီး ကိုက်ထားလိုက်တယ်။ မသွားပါနဲ့ လို့ Aကျယ်ကြီးေAာ်လိုက်မိမှာစိုးလို့။ ငါ့Aသံတွေကိုလည်း ထိန်းချုပ်ထားလိုက်တယ်။ ကဲ.. မေAာ်ဘူး၊ လှမ်းမခေါ်ဘူး။ တAားကြီး စူးရှပြီး နာကျင်လာတဲ့ရင်ကိုတော့ ဒူးနျစ်ဖက်နဲ့ Aတင်းဖိထားလိုက်တယ်။ သွားပါ မိမန်ွရယ်၊ ဟိ.ု .. AဝေးထိေAာင်သာ သွားလိုက်ပါတော့…………………….
Yar Za Win Hte Mhar Mg Ko Htar Yit Khae